Zonke izizwe has, umlando walo lasendulo, isiko eliyingqayizivele futhi engaqondakali. Ingxenye indaba Yiqiniso, ubuhlanga nezinkolelo zenkolo, okuyinto ezimweni eziningi eholwa sikhathi emazweni athuthukile. Ngaleso sikhathi, Ancient Greece kwaba uhlobo umfuziselo isimo kakhulu, futhi inkolo ngokunqoba kwamaGreki asendulo kwaba uhlelo ephelele, okwaba yingxenye yokuqothula eminye imiphakathi, kuhlanganise wonke uMbuso WaseRoma.
Namuhla, cishe wonke umuntu emhlabeni ukwazi amanga, abadali okwakukhona namaGreki. Inkolo nje wathola nabo isibonisi. Ubani engazazi izindaba Hercules anamandla, noma izindaba ezinhle ezimayelana Aphrodite? Yebo, namuhla limane izindaba ukujabulisa, kodwa ngaleso sikhathi kwaba inkolo yangempela ngokunqoba kwamaGreki asendulo.
inkolo yamaGreki aqala ukuvela emhlabeni ekupheleni ngenkulungwane yesibili BC, njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi amaGreki eqala kwathatha imodi inceku wokuphila, ukudala emzini wokuqala ophucukile, ukuzitika isifundo yobuciko, wahlanganyela Izinkomo zizalela.
Ngalezo zinsuku isayensi, ngenxa yalokho, akazange akhona futhi abantu basendulo abazange babe ngisho izincazelo eyisisekelo zemvelo ezifana umbani, imvula nesomiso. Yingakho baqala ukwakha izinkolelo, okuyinto kuchasiselwe ngokuphelele emhlabeni engaqondakali essence yaphezulu.
Inkolo ngokunqoba kwamaGreki asendulo, besitshela ukuthi ekuqaleni sikhathi, kwakunebandla nezinxushunxushu kuphela, kusukela obadalwa onkulunkulu lokuqala, nezingane ababezinikezele imidondoshiya enamandla futhi sesabeka.
Abantu ngesiGreki udale kela onkulunkulu abaningi ngubani, ngokusho legend, babehlala ezweni elidume INtaba i-Olympus, ukuthi itholakala North yaseGrisi kuze kube namuhla. I abantu basendulo babekholelwa ukuthi umuntu desecrated indawo engcwele futhi wazama enyuka "kombuso onkulunkulu," ngeke bakwazi ukuphindela emakhaya.
inkolo ngesiGreki amangalelwe ukuthi kukhona onkulunkulu nambili ezinkulu, ngamunye eyayintula imisebenzi yayo, ine ithalente abanye futhi, ngesikhathi esifanayo, kanye nobubi obuthile. Inkinga enkulu lapha kwaba uZeyusi, ngubani ngoba ethathwa njengeSabatha kunkulunkulu ongumninimandla umbani nangokuduma. Yilokho uNkulunkulu fanele sovereignty.
Umkakhe, ogama lakhe lalingu-Hera, abantu asendulo ayekhulekela njengendlela umqaphindlu nomndeni injabulo.
UZeyusi futhi kwadingeka abazalwane abaningana, onamandla kunayo lapho wawubhekwa njengendawo Poseidon. Lokho wayengumuntu umbusi esesabekayo timphawu zasolwandle, okuyinto wakwazi ukubangela iziphepho kanye neziphepho. Imfanelo ebalulekile yokubukeka kwakhe kwaba Trident. Inkuthalo yayo wamsiza onkulunkulu bamanga ezincane, njengokuhleleka ulwandle Nymphs futhi onkulunkulu emoyeni.
Nokho omunye umzalwane - eHayidese - wayala umbuso sabafileyo. Bathi ukuze uthole umphefumulo oshonile kwakudingeka ngiwele emfuleni Styx futhi ukuhlangabezana nge monster esabekayo Cerberus. Emuva alikwazanga ukhona.
UZeyusi waba nezingane ezimbalwa ababebhekwa njengezibonelo kungekho enamandla kancane, futhi wahlangana nobani amaGreki bakhuleka eminyaka. Ngokwesibonelo, ukukhanya unkulunkulu Apollon kubhekwe, ngenhlanhla, axhasa ezobuciko kanye izinkondlo.
U-Arthemisi wabase - Aplonov udade twin - kwaba umvikeli wokuzingela, ngokuthi umvikeli yezimila nezilwane ezihlukahlukene. isilwane Engcwele lonkulunkulukazi kwaba yensikazi.
Ares sasibhekwa njengophawu lokuthi unkulunkulu esesabekayo, ongalawuleki nokunobudlova impi, owasiza amaGreki empini. Futhi u-Athena ngokusho legend, wazalelwa kusukela ekhanda kaZeyusi, naye ube ngumsizi wabaningi, ubuciko nempi, kanye unkulunkulukazi ukuhlakanipha. By the way, lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa yakhe nokukhazimulisa izakhamuzi zedolobha of the gama elifanayo.
Mhlawumbe wonke umuntu wezwa u-Aphrodite, azalwe Foam ulwandle. Lokhu unkulunkulukazi eyisibonelo wangempela ubuhle, futhi kubangelwa imizwa ezinjengothando kanye nogqozi.
Hephaestus kubhekwa izinyonga wensimbi unkulunkulu. Abantu babekholelwa ukuthi izikhali ezenziwe ngezandla zakhe, kwaba esinganqobeki, balidla, wathola igunya phezu isitha.
Hermes kwakubhekwa njengesibusiso isithunywa, kanye isela akunakuqhathaniswa.
Onkulunkulu main kwakungezona izinto kuphela yokukhulekela. Inkolo yasendulo amaGreki umangalele ukuthi kunezinkulungwane onkulunkulu encane owasiza ukusebenzisa izwe. Lawa kwakungamadodana Nymphs, satyrs nezinye nezidalwa zomoya.
Ngaphezu kwalokho, AmaGreki ayekholelwa e ezilo iyingozi, babemesaba kakhulu. Kubalulekile nokukhumbula nje mayelana Cerberus kanye Minotaur.
Lokhu incazelo emfushane nasekutheni yiziphi izinkolelo sabantu isiGreki kunikeza umbono mayelana nendlela ezimpilweni zabo. Phela, ngamunye ozinikezele unkulunkulu ithempeli udumo imikhuba yabo labetibambile ngokusuka enhliziyweni, bedumisa futhi bazama cajole, bekholelwa ukuthi kungakusiza ufinyelele inhlalakahle.
Ngezikhathi zefilosofi inkolo lasendulo usezuze kubaluleke kancane, njengoba kuyintando laba bantu futhi wanika umoya lokuqala besayensi yanamuhla. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, ezweni lonke ukusakaza ngezinkolelo zobuKristu. Ngakho namuhla kela onkulunkulu abaningi akusona ngaphezu enhle inganekwane izinhlamvu.
ONgcwele - Vvedensky Cathedral (Karaganda): incazelo kanye nomlando
Blagoznanie Futhi Harmony
Izimpawu lomuntu ngamademoni. Ukuthi baziphathe kanjani futhi kanjani bazivikele ekhwelwe yidemoni?
"Ulayini uMarta": abadlali ngokuthinta ifilimu
Imithi kanye nozakwabo eshibhile: etafuleni. kumakhophi Yalutho izidakamizwa ezibizayo
I-Anuloma-Viloma. Umkhuba wokuphefumula (izimpendulo)
Ama-phophostic amorphous emceni - lokhu kusho ukuthini? I-Amorphous phosphates emcimbini ngesikhathi sokukhulelwa nasenganeni: izimbangela
Happy Birthday, Sonia! Siyakuhalalisela evesini bese temibhalo yephrozi netindzaba
Beats Wheel do lapho tormozhenii.Chto?
Kevorkov Vyacheslav Ervandovich --KGB jikelele ezinkulu. Biography, izincwadi ezingcono kakhulu